Audio recording with fl studio
FL Studio Tutorial -1
by Htin Lin
Audio Engineer/Senior Lecturer at Starlight Media Insitute. School of Audio Engineering. Lagos Nigeria.
Starlight Media Institute
Option  Audio settings က က က က.. က က က(ကကSetting က က က ကက က က က က ကOption က က က က က က က ကက က ကက က က က က က….က)
ASIO4ALLv2 က က က က က ကSound driver က က ကက က က က က က က က က ကFL က ကRecord က က က ကက က က က က က က ကDriver က က ကက က က ကက က က က ကSound က က က က က က က က ကdriver က ကက က က က က က က က က က က က က က က က*(က က က က က က က က က က က က က ကက က က က က က ကက က က က က က က က က က က ကက က က ကsound driver က က က ကက က က က က က ကsound card က က က က က က က က က က က က ကက က က က က က က က ကက က က က က က က က က က က က က က က က က က က )*
Master channel မ မRecord မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ…မ မ မ မ မ မ မ မမ မ မ မ မ မMix မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မမ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ မ;-D မ မ မ မ မ မ မ12(1) Channel က က က က က က က က က ကက က က က က က က က က (2) Floppy disk icon က က က က က ကက က က Save က က - က က က က က က က ကက က က ကက က ကက က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က ကက က က က က က က က က က က က က က က
- Audio Input က က ကmicrophone က က က ကက က က က က က က က က က က က ကက က က ကက က က က က က က က က က က ကinput deviceက က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က ကက က က က က က က က က က က ကက က က က က က က က က က က က က က
- Record button က က က က က က- Message box က က ကက က က က က က က က က က ကက က က က က က က က က Record က က က က က က က က က က က က က က ကက က က က က က က ကက က က က က က က က- Audio file type က က က Record က က ကက က က က က က က က က က က က က က… “Audio, into the playlist as anaudio clip” က က က က က က က ကက က က က က
- က က က က က …က က က က က က က …က က က က က …က က က…က က က က Timing က က က(က က ကက က ကက က ကRecording က က က က က )က က က က က ကက က က က က က က က က က က- Playlist က က ကကChannel Window & Step Sequencer က က ကက က က က က က က က က ကက က က ကက က က က က က က က က က က က- Browကser က ကRecorded က က က က က က က က က က က က က က က က ကက က က က က က ကက က က က ကက က က က က က က က က က က က က က က က က က
“Audio, into the Edison audioeditor/recorder”က က က က က က က က က က က ကRecordက က က က က ကက က က က က က က က က က ကက က က က ကAudio Recording က က က ကက က က က က က က က က က က က က က ကက က က က ကက က က က က က က က က ကက က က က က က ကက က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က ကက
Audio Recording က က က က က ကက က က က က က က က က က က က က က က က က က က က ကAdobe Audition က က က ကက က က က က က က က က က က က က က ကက က က က က က ..ကက က က က က က က က က ..ကက က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က ကAdobe Audition က ကRecord ကက က က က က က က က က ကFL က က ကက က က က က က က က က က က က က ကက က က က က ကက က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က
Fl studio guide basic fundamentals